Apho uthenge khona Abalandeli be-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Julayi 10, 2019 0 IiCententarios 925
Ngokuhamba kwexesha, i-instagram ikhula ngakumbi nangakumbi. Abantu abaninzi bajoyina iqonga, bafumana imisebenzi eyahlukeneyo kwi-Instagram. I-Instagram ayikhulisi kuphela, ikwafumana ukuthandwa ngabantu. Kule mihla inethiwekhi yentlalo ibizwa ngokuba "yeyabantu abancinci", xa uyithelekisa kakhulu neFacebook, ebizwa ngokuba yinethiwekhi yoluntu yabantu abadala. Isicelo esenziwe ngo-201o, sinesixa esikhulu sabasebenzisi, ukusukela kwiinkwenkwezi ezidumileyo zaseHollywood ukuya kwizilwanyana zasekhaya. I-Instagram ibonelela ngeenkonzo zayo kubasebenzisi abanemiqobo embalwa xa kuthelekiswa namanye amaqonga.
Njengoko i-instagram ikhula, abantu bajonge ukwenza okufanayo ngaphakathi kweqonga. Ukufuna abalandeli abaninzi nangakumbi, ukuthanda kunye nezimvo. Kwaye kukho indlela ende yokuhamba ukuze uvune impumelelo ngaphakathi kwenethiwekhi. Kungenxa yoko le nto abantu abaninzi bekhetha ukuhamba ngokukhawuleza, nangona kumnyama, indlela ye-instagram. Ke baqala ukujonga indawo yokuthenga abalandeli be-instagram.
Yintoni abalandeli be-instagram?
Ngelixa kuFacebook sinokuthiwa "ngabahlobo", ngaphakathi kwe-Instagram sifumana "abalandeli". Kodwa yintoni abalandeli? Abalandeli be-Instagram ngabasebenzisi ababhalisela iakhawunti yakho, abanokubona yonke into epapashwayo, bagqabaze ngayo kwaye bayithande. Ke unokwabelana noshicilelo lwakho naba basebenzisi. Eli gama lisetyenziswa ngendlela efanayo ngaphakathi kwamanye amaqonga, umzekelo iTwitter.
Kuyimfashini okwangoku ukuba nabalandeli abaninzi. Abantu benze umbono wokuba ngabadumileyo ngaphakathi kwi-instagram. Uninzi luye lwazifikelela. Kodwa abanye abayenzi. Abasebenzisi abaninzi be-instagram bangaphezulu kwenani labo abalandeli, ukuthanda, izimvo kunye nokubonwayo. Nangona kunzima kakhulu ukufezekisa udumo ngaphakathi kweqonga elinabasebenzisi abaninzi. Iimpapasho ezininzi ziyahamba zingabonwa. Impumelelo ngaphakathi kwe-instagram ifezekiswa ngumkhankaso omkhulu wokuthengisa, ithamsanqa, ukunyamezela kunye nexesha elithile.
Awunakho ukufumana isixa esikhulu sabalandeli ngobusuku nje obunye. Kwaye yile nto kanye abayifunayo abasebenzisi abaninzi. Kwaye bayamangaliswa indawo yokuthenga abalandeli be-instagram.
Ungabuthenga phi abalandeli beakhawunti yam?
Omnye wemibuzo ebuzwa kakhulu ngabasebenzisi be-Instagram abafuna ukuba neakhawunti nabalandeli abaninzi yile: indawo yokuthenga abalandeli be-instagram. Kwaye ayingobasebenzisi nje be-instagram abaqhelekileyo abakhathaleleyo ngenani labo balandeli. Abantu abaninzi ngakumbi abadumileyo, abezopolitiko kunye nobuntu ukupenda amanani abo abalandeli. Uninzi lwe uninzi lweeakhawunti ezilandelwayo I-Instagram inenani elikhulu labasebenzisi be-phantom ngaphakathi kwenani labalandeli. Abasebenzisi be-Ghost iiakhawunti ngaphandle kopapasho, abalandeli kwaye zisebenza njenge nani elinye.
Zininzi iindawo indawo yokuthenga abalandeli be-instagram Kulula kakhulu. Nangona bonke benokhuselo oluthandabuzekayo. Kwaye ukuthenga abalandeli be-instagram yindawo emnyama kwiqonga. Kwaye ngaphezulu kwako konke, akukho nto icetyiswayo. Iindawo onokuthenga kuzo abalandeli zivela kwiiakhawunti ze-instagram, kumaphepha ewebhu kunye nokusetyenziswa.
Nokuba uyafumana Uyothenga phi abalandeli baka-Instagram Akukho nanye kwezi ndawo isimahla. Zonke zinikezela ngamaxabiso athile kuxhomekeke kwinani labalandeli olifunayo. Ukongeza koku, abalandeli onokuthi ufumane (njengoko besesitshilo ngaphambili) iiakhawunti okanye abasebenzisi besiporho. Kwaye nokuba unenamba enkulu yabalandeli, ukusebenzisana kwabo neempapasho zakho kusuka kokuncinci ukuya ku-nil.
Ukungancedi ukuthenga abalandeli
Ukusetyenziswa kweendawo indawo yokuthenga abalandeli be-instagram izisa izinto ezingalunganga ngaphezu kwezibonelelo. Ukuba sixoxa malunga neenzuzo eziziswa sesi senzo, sinokufumana kuphela. Oku kukuba sinokufumana isixa esikhulu sabalandeli kwiiyure ezimbalwa. Ukusuka koku inani leengxaki zenziwe. Eyona iphambili kukuba "abalandeli" bakho abatsha akukho nto kwaye akukho nto iphantsi kunezo kuthiwa ziingxelo zomoya okanye abasebenzisi.
Xa uninzi lwabalandeli bakho lwenziwe ngeeakhawunti ze-ghost, ukusebenzisana kwezithuba zakho kuyafana ne-akhawunti yakho ukuba ubungenabo abathengi abathengiweyo. Ukongeza, koku kuyongezwa inyani yokuba akukho ndawo apho unokuthenga abalandeli ukhuselekile ngokupheleleyo. Ke kuyacetyiswa ukuba ungathengi abalandeli.
Kutheni ndingafanele ndithenge abalandeli?
Ngaphambili sithethile ngezizathu ezininzi zokuba kutheni ikhuselekile kwaye icetyiswa ukuba umsebenzisi we-instagram sukuthenga abalandeli. Xa uthenga aba "balandeli" uthenga inani kuphela. Akukho sibonelelo sinxulunyaniswa nokuthengwa kwabalandeli, ukongeza kulwandiso lwabalandeli bakho. Ezingathi azikho xa sele unazo. Ukusukela, uninzi lwezi akhawunti zithengwayo ziziporho. Zenziwe kuphela ukuba zilandele, hayi ukusebenzisana nawe.
Eyona ndlela ilungileyo yokufumana abalandeli
Ukufezekisa impumelelo yeakhawunti yakho ye-instagram, into ebonisiweyo iya kuba kukuyenza ngendlela eyiyo. Ngaphandle kokuthenga abalandeli beziporho. Ukufumana abalandeli kwi-instagram ngeyona ndlela ilungileyo, unokulandela ezi ndlela zilandelayo:
Chaza ukuba ngabaphi abaphulaphuli ofuna ukufikelela kubo. Liza kuba yintoni udidi lweakhawunti yakho, nokuba yeyokwakho, ishishini, kubugcisa bakho, phakathi kwabanye.
Yenza umxholo omuhle weprofayile yakho kwaye uchaze ii-aesthetics zayo.
Yenza inkcazo entle yeprofayile kunye nefoto elungileyo kuyo.
Yabelana ngomxholo onokuba nomdla kwabanye okanye uyonwabisa.
Sebenzisa ii-hashtag ezihamba nomxholo wakho kwaye kwangaxeshanye zisetyenziswa ngaphakathi eqongeni.
Landela ezinye iakhawunti ezifanelekileyo.
Buza abalandeli bakho ukuba banokwabelana nomxholo wakho.
Yiba ngokuhambelana nezithuba okanye amabali akho. Ngokukhethekileyo kunye neyokuqala.
Yiba neakhawunti kawonke wonke.
Kuya kufuneka ukhumbule ukuba xa ufuna iakhawunti kunye nabalandeli abaninzi, lo mnqweno awuyi kuzalisekiswa ngoko nangoko. Ngaphandle kokuba unethamsanqa ngokwaneleyo ukuba ube yintsholongwane kwaye ufumane abalandeli ngokukhawuleza. Eyona ndlela yokufumana impumelelo ngaphakathi kwiakhawunti ye-Instagram iyacotha kwaye ikhuselekile.
Iakhawunti yabucala kunye neyabantu
Kuyaziwa ukuba ngaphakathi kwe-Instagram kukho iintlobo ezimbini zeeakhawunti. Bucala kunye esidlangalaleni. Xa kuziwa ekufumaneni inani elikhulu labalandeli, kulungele ngakumbi ukuba ne-akhawunti yoluntu, ebonakalayo kwabanye abasebenzisi be-instagram. Imigaqo-nkqubo ye-akhawunti yabucala ye-Instagram inezithintelo ezithi zingalungelanga abasebenzisi abafuna ukufumana okulandelayo.
Xa une-akhawunti yabucala, ekuphela kwabantu abanokubona iiposti zakho ngabo unike imvume. Nangona kunjalo, xa une-akhawunti kawonkewonke, nawuphi na umsebenzisi we-instagram uyakwazi ukubona iprofayili yakho kunye nokushicilelwa kuyo.
Izenzo ezithathwe yi-instagram kwiiakhawunti zakho
Ngaphakathi kwe-Instagram kukho inani elikhulu le-phantom kunye neeakhawunti ezingezizo. Ii-akhawunti njengoko unokuthi uziqaphele ngaphambi kokusebenza kuphela njengenamba ngaphakathi kweqonga. Kukho amaphepha amaninzi kunye neeaphulelo ezithengisa abalandeli. Uninzi lwezi azikho semthethweni, kuba iiakhawunti okanye zibubuxoki okanye iziporho. Amanye amaqonga aye ahlangabezana nengxaki efanayo. I-Twitter ibisenza i-akhawunti ye-70 yezigidi zesigidi kunyaka odlulileyo.
I-Instagram isebenzisane neeakhawunti ezingezizo iminyaka eliqela, kodwa ngokungafaniyo ne-Twitter ayithathanga manyathelo aqatha. Nokuba kutheni ngokuchasene neeakhawunti zeziporho okanye ukuthengiswa kwabalandeli. Ishishini eliya liphumelela ngakumbi ngaphandle kweziphumo.
Yintoni ekhokelela abasebenzisi ukuba bathenge abalandeli?
Siphila kwiminyaka yetekhnoloji. Iinethiwekhi zentlalo zilawula uluntu kwaye kunzima kakhulu ukufumana umntu ongenayo iakhawunti enye okungenani kwinethiwekhi yoluntu. Ukusetyenziswa kothungelwano loluntu sele inguquko kunefashoni. Ukuba nabalandeli abaninzi, ukuthandwa okuninzi kunye nezimvo ziye zaba yinto efunwa ngabantu ngakumbi nangakumbi.
Uhlaziyo lwamajelo asekuhlaleni luzise ngaphambili umsebenzi omtsha, yile yababizwa ngokuba "ngabaphembeleli", abasebenzisi abaqhelekileyo be-Instagram (okanye enye inethiwekhi yoluntu) abafikelela kudumo kwaye bafumana inani elikhulu labalandeli okanye abalandeli. Uninzi lwaba bantu banabalandeli abaninzi baluzuzile udumo ngeendlela ezahlukeneyo, ngomxholo olungileyo kunye nokunyamezela, ithamsanqa kwaye nokuba yintsholongwane. Uninzi lwabo lulandela amanyathelo asethwe ngumkhankaso wentengiso.
Ukufumana abalandeli kuya kusiba nzima. Kwaye ukuba nenani elikhulu labalandeli kuye kwafana nokuphumelela kubantu abaninzi. Abafuna ukufumana udumo okanye ukuba ngabantu abaphumeleleyo. Uninzi lwexesha lokuvuna inani elithile labalandeli kuthatha ixesha. Kwaye abantu bafuna impumelelo kwangoko. Okanye okungenani abalandeli abaninzi ngokukhawuleza. Yiloo nto kanye enika amaphepha, iiakhawunti kunye neeaphulelo zokuthenga kubalandeli. Nangona elona cebiso likukufumana abalandeli ngokwemvelo.
1 Yintoni abalandeli be-instagram?
2 Ungabuthenga phi abalandeli beakhawunti yam?
3 Ukungancedi ukuthenga abalandeli
4 Kutheni ndingafanele ndithenge abalandeli?
5 Eyona ndlela ilungileyo yokufumana abalandeli
6 Iakhawunti yabucala kunye neyabantu
7 Izenzo ezithathwe yi-instagram kwiiakhawunti zakho
8 Yintoni ekhokelela abasebenzisi ukuba bathenge abalandeli?